ဖမ်းဆီးခံ ဆန္ဒပြ ပြည်သူတွေ ကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ အင်းစိန်ထောင်ရှေ့မှာ တောင်းဆို
မုံရွာမှာဆန္ဒပြ ပြည်သူတွေကို ဘယ်လိုဖြိုခွင်းခဲ့လဲ
တာမွေ၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်းမပေါ်မှာ ဒီနေ့ ညနေ ၄ နာရီဝန်းကျင်က အခြေအနေ
တာမွေ၊ အိုးရှင်းထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေပြန်ထွက်လာ
မုံရွာမှာ ပြည်သူတွေကို ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး
ဆန္ဒမပြခင်ကပင် အင်အားသုံးဖြိုခွင်းပြီး လိုက်လံဖမ်းဆီးနေ
ဘားအံမှာ ဆယ်ဦးထက်မနည်း ဖမ်းဆီးခံရ
စမ်းချောင်းမှာ ရဲတွေ ရပ်ကွက်ထဲထိ လိုက်ဆွဲနေ
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် ခရစ္စတင်း ရှရနာ ဘာဂနာ
သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ဘယ်သူလဲ
ကုလရုံးရှေ့က မြန်မာတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း
သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားချက်အပြည့်အစုံ မြန်မာဘာသာနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
ပါတီသဘောတူညီချက်မရဘဲ UEC သစ်နဲ့တွေ့ဆုံပွဲတက်သူကိုအရေးယူမယ်လို့DNPနဲ့ UNDP ပါတီ ထုတ်ပြန်
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့အလွတ်သဘောအစည်းအဝေးမှာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်
နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်း- International Breaking News
ကော့ကရိတ်မှာ တပ်နဲ့ ကေအန်ယူတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ စစ်တပ်ဖက်က ၃ ဦးသေဆုံး
နေပြည်တော်မှာ ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကို မျက်ရည်ယိုဗုံးအသုံးပြုပြီး လူစုခွဲကာ ဖမ်းဆီး
နေပြည်တော်မှာ ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကို မျက်ရည်ယိုဗုံးအသုံးပြုပြီး လူစုခွဲကာ ဖမ်းဆီ
CDM မှာ ပါတဲ့သူတွေကို စစ်တပ်ကဝင်ဖမ်းရင်း ကေအန်ယူဂိတ်ကိုကျော်လာလို့ တိုက်ပွဲဖြစ်
ပျဉ်းမနားထိုင်သပိတ်ကို မျက်ရည်ယိုဗုံးသုံးကာလူစုခွဲ ၊ ဖမ်းခံရသူ ၁၀ ဦးထက်မနည်း ဖမ်းခံရ
မြစ်ကြီးနားဆုတောင်းပွဲ အနီး လုံခြုံရေးတင်းကြပ်
Ma Nett11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Good morning 7Day TV News.You haveawonderful day.
where are the young children?? #Disliked
Myint Tun12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Democracy, democracy, amay su, amay su, thamada gyi, thamada gyi, cdm, cdm, alo ma shjt, alo ma shit, arr narr shin, arr narr shin, all sounds are disappeared today. Awwwww, thin khar ya, thin khar ya, thin khar ya !
Cro Shirt12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
No democracy no freedom no wifi no You can’t sign Democrat with dictator
man man13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ေထာင္ထဲကလူမိုက္လြတ္ထုတ္ လူေကာင္းေတြေထာင္ထဲထည့္ မင္းေအာင္လိုင္မွလုပ္တတ္တာ သူကလြဲကမၻာမွာဘယ္သူမွမလုပ္တဲ့အလုပ္ မင္းေအာင္လိုင္ရယ္ ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ
zaw zaw13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Good job KNU♥️🙏👏👏💪💪💪
ฟ ฃ14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ျမန္မာျပည္ၾကေတာ့ ဘယ္ေတာ့လာမာလဲ မအလ စစ္စခန္းေတြကို ခ်ေပးပါ
Naing Love15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
myo koko15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
လေးစားပါတယ် အရေးတော်ပုံအောင်ရမြည် စစ်အာဏာရှင် ကြ ရှုံး ပါစေ
Khin Thuzar Thuzar15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Thank so much P
Minn Sekka15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
kaung kaung15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
့အကုိတဲ လူကျဖင့္ အေျခာက္ျကီး
Myanmar Bkk16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ဘုိင္တန္ေရ ျမန္မာ စစ္အာနာ မင္းေအာင္လူိင္ကုိ သက္ေပးဘာ
Ko Tin Htun Aung Ko Htun16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
David Hla Htay Aung16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ပြညသူပိုက်ဆံစား တပ်မ​တော်သား သူပုန်တပ်ကြီးဖြစ်သွားပြီ
Min ma17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Cro Shirt17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
All protesters better carry gun
Chit Naing3210 ChitNaingLin17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
မအလ သု့ကိုမလုပ်ရဲဘူးလို့ထင်နေတာလာ ခု ဗိုလ်မှူးတဦးသေးသွားပီး ဇာတ်လမ်းကခုမှစတာပါ 😆😆
John Wick17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Yeaaaaaaaaaaaaaah .....all ture and tank you so much u kyaw Moe Htune...all god and all people from myanmar will bless you...we must win..
Maw Maw17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Thank you so much.you are our hero.we are so proud of you.
MyoMin Aung18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
For You18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
နိုင်ငံရေးမကောင်းရတဲ့ကြားထဲ အလိုက်ကန်းဆိုးမသိဘူးလို့ပြောခြင်လဲပြောပါစေဗျာ အခု သတင်းတင်ဆက်တဲ့ မမ နာမည်လေးသိလို့ရမလားဗျ😁😁
Marcelo Sanchez Febles18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Saludos y besos desde La Plata Buenos AiresArgentina
Hermosa la Baic yo tengo una X 55 año 2019 y anda muy bien con7años de garantía del fabricante y con6bolsas de aire techo panoramico sensores de estacionamiento delanteros y traseros motor Mitsubishi 1.5 turbo Mivec de 148 caballos de fuerza.
Lay Lay18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Arme no no no voive
Moe Tun18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Free our unarmed citizens at once.
thi ha18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Good love kNu
Ye Sait Phone18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
လမ်းသရဲတေ လူမိုက်နဲ့တွေ့သော အခါ😟
Taet Naung18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Kimmy จับขี้ด้วยมือเปล่า18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
แม่สาย มือถือ18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
တိုင္းျပည္ဆူပူေအာင္လုပ္ေနတာ ပစ္မွာပဲ တိုင္းျပည္ကိုဖ်က္ဆီးေနတာ
Ko Ko18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Ko Ko19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
မသိရင္ေတာ့ ဟုတ္သလိုဘဲ မရွက္ဘူး ေခြးမသား
Chit Thamee19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Anna cing Anna cing19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ဝမ္းသား လ​ြ န္းလို့ ငိုမိပါတယ္
Thaw Dar Lay19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
အရပ္ဝတ္ေတြနဲ႔ လူေတြ က ေတာ့ နဲနဲ မ်ားသြားၿပီး ရဲေတြ အာဏာ႐ူး ရဲေနာက္လိုက္ ေခြး ေတြ အေသဆိုးနဲ႔ေသပါေစ မိမဆုံးမဖမဆုံးမ သူတို့အေမက လူနဲ႔ မ်ားရထားတာလားကြား လူသားခ်င္မစာမနာ အဒီမွာ႐ွိတဲ့ ရဲ စစ္သား သူတို႔အေဖအေမ သူတို႔ မိသားစု ေတြ အေသဆိုးနဲ႔ ေသပါေစ
phoe nwe19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Supit Jantasim19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Khin Thida Kyaw19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ko maung19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Panchit Thu19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
get out nld
sam Sung19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
အျမစ္ပ်က္ေခ်မႈန္းေပးပါ KNU အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္။
Aung myo19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
များများသတ်နိုင်ကြပါစေ knu good luck 🧧🧧🧧🧧🧧🧧
(Aww)ေျပာရအုန္မယ္ အျမဲတမ္း လိုလို႔ လိုင္းေပၚတတ္ေနတဲ့ ေရႊထူး နဲ႔ ေရႊမႈန္ရတီ ဘယ္ေရာက္ေနလဲ ျပည္သူေတြ ဆန္ဒ ျပေနခ်ိန္ ဝါရင္ အႏုပညာ ႐ွင္ေတြ ကိုစီပါဝင္ေနခ်ိန္မွာ ေရႊထူး Vs ေရႊမႈန္ရတီ ဘယ္ေရာက္ေနလဲ ေသသြားၿပီးလား အခု တိုင္းျပည္ ဘာျဖစ္ေနလဲ သိလား ျပည္သူ နဲ႔ တန္းတူ စိတ္ဓာတ္ မ႐ွိဘူးေနာ အႏုပညာ႐ွင္ေတြ လုပ္ၿပီး.
nga xtet19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ဒီ​ေန႔ 27.2.2021 ​ ​ေစာက်စစ်​ေတ ​ေစျးလာ၀ယ်တာ ပြည်သူ​ေတဆီက ထမင်း​ေတာင်းစားတယ်​ေနာ် သူတို႔ကြည်႕​ေတာ့ ဘာလိုလိုနဲ႔ ငတ်ပြတ်​ေနကြတာ ​
Eikar Kway19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Hoo Hoo20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရပ်မှာ အေးအေးချမ်းချမ်းမနေချင်ပဲ ဖင်ထယားတဲ့ဆန်ဒပြတဲ့သူတွေ ခံပေါ့
Daw Tha Pya20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Myat Kyi20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Gon Goon20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
DKBA, KNU and KIA, you should kill burmese soldiers and police.....
May Htet20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Thanks you so mach! ❤️❤️
Luu maw Luu maw20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Moe Moe20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ထားဝယ်သူ သားများ ဘေးကင်းကြပါစေ
Myo Min Khaung20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
တပ်မတော်သားတွေနဲ့၊ ပြည်သူ့ရဲတပ်သားတွေ၊ နားမကြား မျက်စိမမြင် လုပ်မနေကြပါနဲ့။ ပြည်သူတွေရဲ့ အသဲထဲက ငို‌ကြွေးသံတွေကို မကြားကြတော့ဘူးလား။ ပြည်သူတွေ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်အဖြတ် အရိုက်အနှက်ခံနေရတာတွေကို မမြင်ကြတော့ဘူးလား။ သူပုံ မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ ကိုယ်ကျိုးကာ အမိန့်တွေကို နားထောင်မှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ပြည်သူတွေရဲ့ ရင်ထဲက ရဲရဲတောက်တောက် ကျွေးကျော်လာတဲ့ တိုက်ပွဲခေါ်သံတွေကို ကြားပြီး ပြည်သူတွေဘက်က ရပ်တည်မှာလား။ ပြည်သူတွေကို ခွေးစာမကျွေးပါနဲ့။ ပြည်သူတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး သူပုံ မင်းအောင်လှိုင်ကို တိုက်ထုတ်ကြပါ။
nu yin win20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Htoo Myat20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
kyi theynn20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Myo Kyin20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Thaw Dar Lay20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ေခြးေတြ ပါ လူနဲ႔ ရၿပီးခဲ့တဲ့ လူေတြမဟုပ္ပါဘူး အာဏာ႐ူး ရဲေတြ ရာထူး တိုးဖို႔တြက္ ဇြတ္မိုက္ေနတာပါ သူတို႔ အေဖအေမက လူနဲ႔ရၿပီး ေမႊးခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး ေခြးနဲ႔ရၿပီး ေမႊးခဲ့တဲ့ ရဲေတြ ပါ...🖕🖕🖕🖕🖕
Equine Port'S20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ကိုထိုက် ကိုထိုက်20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Cro Shirt20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
We don’t need dictator. Military hurts economic Burmese leaders are selfish
We WINDOWS20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ပြည်သူအဏာပြည်သူသာ ပိုင်ဆိုင်ရမည် ...8️⃣8️⃣8️⃣8️⃣
aung aung20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สอง สอง20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
phoe nwe20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
သူခိုးက သူခိုးနဲ့တွေ့ ပေါင်းလိမ် ပေါင်းခိုး ပေါင်းယုက်
smile soung20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Leo Nard20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Ri Na21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Robert Hmung21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ရေခ မီးခ တွေပါတို့းတောင်းနေပါတယ်